Soo dejisan Badoo 4.54.2 – Vessoft
Soo dejisan Badoo
Badoo – software ah inay ku wada xiriiraan shabakada bulshada ee caanka ah la isticmaale adduunka oo dhan. Software wuxuu kuu ogol yahay in ay ku chat, yeedhi isticmaala si ay ula kulmaan, aragtida bogga soo booqda, la qiimeeyo sawiro, iwm peculiarity ee Badoo waa awooda si aad u hesho users u dhow meesha aad hada adigoo isticmaalaya geolocation. Software ayaa sidoo kale u saamaxaaya in ay baadhaan dadka isticmaala ay ku soo koobin tilmaamay iyo danaha gobollada xulay. Badoo ka kooban qalab ah reserved software ee baahida user.
Isbarasho haboon la users
Search ee isticmaala goobta joogay
Galitaanka ee bogga soo booqda
Badoo Software la xiriira:
العربية, English, Français, Español... Twitter 6.22
العربية, English, Українська, Français... WhatsApp Messenger 2.16.337
العربية, English, Français, Español... Vine 5.42.1
العربية, English, Українська, Français... AnTuTu Benchmark 6.2.6